Ahoana no tokony hanafiako mandeha amin'ny bisikileta? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Akanjo mpandeha bisikileta an'ny vehivavy - ahoana no fomba hiteny
Akanjo mpandeha bisikileta an'ny vehivavy - ahoana no fomba hiteny
Ahoana no tokony hanafiako mandeha amin'ny bisikileta?
Ilaina amin'ny fahavaratra: inona nomanaova akanjo mandeha amin'ny bisikileta
Ny sosona fototra maivana miaraka amina akanjo lava fohy fohy mifoka rivotra dia tokony hiaraka amin'ny pataloha fohy maivana. Atsipazo amin'ny kiraro mafana ny toetr'andro, satroka, solomaso ary fanamasoandro vitsivitsy ary afaka mandeha ianao.08.23.2020
Amin'ny maha-mpandeha bisikileta mpomba ahy taloha, mety nandany fotoana betsaka kokoa hanaovana lycra isika noho ny fieritreretan'ny bera azy - yup, ary na dia ny kiraro fohy sy bisikileta tery aza ary ny fitafiana bisikileta tery hafa dia mety amin'ny fampiofanana lava kokoa, indraindray ny lycra dia tsy ' Tsy marina ny valiny - Tsia, tsy ho an'ny bisikileta eto an-tanàna. Angamba mandeha moramora ianao, tsy mandeha lavitra, na, angamba ny zava-dehibe kokoa, dia mety tsy maintsy mijery semi-mendrika ianao amin'ny fotoana hahatongavanao any amin'izay alehanao ary tsy misy toerana hanovanao ny fitafianao - ka andao jerena amin'ny sasany amin'ireo safidy akanjo izay azonao omena amin'ny bisikileta ao an-tanàna. (mozika techno upbeate) - Ny bisikileta dia fomba tsara handehanana manodidina tanàna.
Matetika haingana kokoa noho ny mitondra fiara izy io, tsy dia mandany toerana eny amin'ny arabe ianao, ary mazava ho azy fa tsy mandoto mihitsy. Malalaka kokoa noho ny fitateram-bahoaka ny bisikileta ary mahasalama kokoa satria fampihetseham-batana ary azontsika rehetra atao ny mampiasa kely kokoa amin'izany, sa tsy izany? - Rehefa mandeha bisikileta amin'ny tanàna iray isika, ny sasany amintsika dia mety tsy te ho toy ny ap ro, mety tsy te-handehandeha amin'ny fivarotana enta-mavesatra miaraka amina lycra eny am-pody isika. Raha ny marina, ny ankamaroantsika dia mety te-ho tonga amin'ny toerana alehantsika amin'ny fomba milamina sy milamina ary azo antoka - ahoana raha mitondra fiara fotsiny ianao hiasa ao amin'ny tanàna iray izao? Ny bisikileta avy eo tsy manao fanatanjahan-tena, ary raha manao izany ianao mba hitsitsiana fotoana dia tsy te handro sy hanova akanjo ianao rehefa tonga any am-piasana.
Mila mahay miovaova amin'ny bisikileta mankany amin'ny birao ianao ary miverina amin'ny bisikileta. Noho izany dia tianao ho mahomby sy maharitra ny fitafianao, nefa koa hatsarana. Ny filaminana izao no tsy maintsy atao lohalaharana satria feno fiara sy olona ny tanàna, ary mampatahotra sy mampatahotra ny fikirakirana fiara. na dia mampidi-doza tokoa ho an'ny bisikileta.
Soa ihany fa tsy matetika, fa ny iray amin'ireo antony voatondrona matetika ny antony tsy itian'ny olona amin'ny bisikilety dia satria matahotra ny fiara izy ireo. Noho izany, mijoroa amin'ny lafiny azo antoka, ataovy amin'ny jiro izany, na afaka mampiasa loko taratra mamirapiratra amin'ny fitafianao ianao. Ohatra, kiraro kiraro Fluro, akanjo ba Fluro, akanjom-boninkazo Fluro.
Mora hita kokoa ny loko mamirapiratra, ary asehon'ny fikarohana fa ny loko mamirapiratra, ny zavatra taratra ary ny hazavana dia apetraka amin'ny faritra mihetsika amin'ny vatana. Ohatra lohalika sy kitrokely. - Kiraro.
ny fihenan'ny lanjan'ny voa
Ankehitriny, raha te hampiasa pedal clip-in ianao, dia te-hijery variana bisikileta an-tendrombohitra. Noho izany dia mila manao kiraro bisikileta an-tendrombohitra ianao, midika izany fa afaka miala amin'ny bisikiletanao ianao ary mandeha raha ilaina izany. Raha mampiasa pedal mahazatra toa ireto ianao dia azonao atao ny mandefa etona.
Ny hany zavatra tsy tokony ho adino dia ny rantsantanana misokatra, toy ny kapa na flip flop, dia mety hampidi-doza kely. Raha tsy vintana ianao maka tumbler na dia mijanona eo amin'ny bisikiletanao fotsiny aza dia manosotra ny rantsan-tongotra fotsiny rehefa tena mahasalama dia tena maharary izany, tsy lazaina intsony fa mahasosotra tokoa ny miandry ny hahasitranany mba hahafahanao miverina mitafy ny anao. kiraro mahazatra. Izany dia nilaza fa maro amintsika no miatrika io loza io.- Ary avy eo misy faharetana.
Aza mitafy ny akanjo lava na palitao tsara indrindra, indrindra raha vita amin'ny akanjo iray ihany koa, azonao atao angamba ny misoroka ny zavatra rehetra mila hosasana tanana satria hanao asa be ho anao fotsiny ianao. Ary farany, akanjo fotsy. Tsy hanao izany aho satria maloto ny arabe sy ny kodia ary raha eo akaikin'izy ireo foana ianao dia tsy ela dia toy izany koa ny akanjo fotsy.
Fampiononana. Na dia mandeha bisikileta aza, ny fahalemem-panahy dia midika hoe eo amin'ny Punch ny vodin-tongotrao sy ny pedal ianao. Ka ny akanjo tery loatra na malalaka loatra, mafana loatra na mangatsiaka loatra dia tsy ho tonga lafatra, sa tsy izany? Noho izany dia manana toro-hevitra ambony vitsivitsy ho anao izahay - ny patalohanao dia tokony ho malalaka tsara na lava handehanana hivezivezy mora foana ary ny tena zava-dehibe dia ahodino eo ambonin'ilay bisikileta ny tongotrao.
Ary avy eo ny hany zavatra hafa tokony hotandremana dia ny tongotr'akanjonao ankavanana - na mampiasa clip ianao mba hitazonana azy amin'ny toerany, na ahodinao izany sao manelingelina ny rojom-bolanao izay anaovako izany ' Tsy mila iray noho ny tsy fahampian'ny rojo Worry. - Ny pataloha fohy dia vahaolana tonga lafatra raha ny fahitako azy, na mandeha amin'ny safidy lycra na baggies ianao. Amin'ny ankapobeny dia misy foana ny fahalalahana mihetsika, mitazona ny fahamendrehanao izy ireo ary tsy tafiditra amin'ny rojo familiana.
Mahagaga fa ny zipo mety dia mety ho akanjo tsara amin'ny bisikileta. Zipo fohy na tery angamba tsy satria tsy mahazo aina sy miharihary. Fa ny zipo midadasika kokoa dia afaka mahavita be Avelao hialana, ary raha ny marina dia azonao atao ny mampiditra ny sisin-damosina ao amin'ny fehikibo eo aloha mba hitazomana ny fahamendrehanao.
Skoto marina, mariho koa. Ho an'ny zipo lava sy lava mikoriana, aza hadinoina ny manisy azy tsy ho eny an-dalana, satria mety hampidi-doza ny fanantonana azy amin'ny kodiarana aoriana na ny freins - ny fitazonana manaraka dia ny atin'akanjonao. Mazava ho azy fa olana iray tena lehibe izy io satria ny lamban'ny akanjo mety eo amin'ny hoditrao, mahita zavatra mahafinaritra, tsy miketrona na mitresaka.
Ary ny tendrony ambony dia ny ahazoanao manao atin'akanjo miaraka amin'ny seza fipetrahana, mitovy amin'ilay ilay pataloha bisikileta mahazatra anao, koa raha izany no anaovanao, maninona raha jerena izy ireo - raha mandeha bisikileta ianao, dia mivoaka amin'ireo singa. ary izany no iray amin'ireo zavatra lehibe momba izany. Saingy mametraka olana ihany koa izany. Zava-dehibe ny manamboatra ny akanjonao mifanaraka amin'izany - Eny, amin'ny toetr'andro mafana dia tsara kokoa ny manao T-shirt fotsiny ary mifanakalo ao anaty lobaka na blouse amin'ny birao rehefa tonga any ianao.
Ny hatsembohana dia saika tsy azo ihodivirana amin'ny hafanana ary mety ho miketrona ao ambanin'ny kitaponao ny lambanao. Ka tazomy mandra-piasany. - Eny, ary rehefa mivadika hatsiaka ny andro, dia misy palitao bisikileta tsara tarehy izay sady tsara endrika no mahatohitra rivotra sy rano.
Ugh, ny orana dia fihenan'ny mpandeha an-tanàna, manao pataloha maharitra tsy miaro rano mba hiarovan-tena, na hanaiky fotsiny ho rotsaka ny tongotrao sy ny tongotrao, ary mitondra pataloha sy kiraro ho an'ny birao fotsiny. Amin'izao fotoana izao, ny bisikileta tsy tantera-drano dia mety ho tena kanto sy kanto amin'ny tapany ambony, na afaka mandeha amin'ny poncho ianao, izay mety tsy dia tsara loatra, saingy hiaro anao bebe kokoa amin'ny rano izany. (mozika fitaovana manaitaitra) Fanamarihana manokana ho an'ireo tompokolahy eto.
Azafady, mitafia ny fehikibo ataonao na mampiasa fehikibo raha tsy izany dia mety hiafara amin'ny kibon'ny mpiasa amin'ny fananganana ianao ary raha ny marina dia tsy misy olona te hahita izany. Miala tsiny.- Tsia, tsia. - Tsia, tsy manao izy ireo. - Oh, miala tsiny aho, azafady .- Fanamarihana manokana ho an'ireo vehivavy ihany koa.
Azonao atao ny mandinika t-shirt ambony na tendany ambony satria misy olona te-hahita an'io ary mety tsara aseho ianao, fa atahorana ny fanenitra sy ny tantely. Ary minoa ahy ianao, miresaka avy amin'ny zavatra niainana, tsy fihaonana mahatsikaiky ity. Enga anie ity lahatsoratra ity hanampy anao hahatsapa ho mahazo aina mitaingina ny tanàna, fa mahafinaritra ihany koa raha bisikileta ianao izay tsy mijanona ho bisikilety mihitsy, na eny ivelan'ny bisikileta aza, na olona mandeha bisikileta, fa tsy te-ho toy ny bisikilety .- Mahazo aina sy milay.
Eny, izao raha te hijery lahatsoratra iray hafa momba ny bisikileta an-tanàna eto amin'ny GCN ianao dia azonao atao ny manindry ny lalanao midina any izay ahitanay ireo torohevitra avo indrindra ho anao. Aza hadino ny mijery an'io.
Inona no anaovan'ny vehivavy bisikileta?
Bisikileta vehivavykit -inona no tokonyahoanaovan'ireomandritra ny bisikiletako?
Padding. Ny pataloha fohy vita amin'ny pataloha dia mety ho toa hevitra hafahafa, saingy misy antony iray lehibeanaovan'ireoizy ireo.
Fanafanana sandry sy tongotra.
Betsaka ny zavatra momba ny bisikileta izay mitovy amin'ny lehilahy sy vehivavy, fa ny faritra iray ahitantsika ny fahasamihafana sasany dia ny fitafiana, izay tena miharihary satria misy ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny endrika amin'ny vatana rehefa manova fitaovana Ianao dia vehivavy. (pompe amponga mampihetsi-po) Mahazo fanontaniana be dia be avy amin'ireo vehivavy manomboka bisikileta momba ny inona no fitaovana tsara indrindra ho an'ny bisikileta? Ary tena misy safidy be dia be any izay mety hanakorontana tokoa. Indraindray ny mahatsara sy maharatsy ny karazana fitaovana sasany dia tsy miharihary raha tsy efa nanao dia vitsivitsy ianao.
Ka izao ny zava-misy, eny, okay, ny zava-misy momba ny safidin'ny fitaovana ho an'ny vehivavy. (mozika milamina) Ny akanjo anaovanao amin'ny bisikileta dia iray amin'ireo antony lehibe indrindra hampiononana anao. Ka raha te hankafy ny bisikiletanao ianao, dia tena zava-dehibe ny fahatsapanao aina amin'izany.
Eny, ny ampahany amin'izany dia tokony ho tsara ihany koa, mazava ho azy, satria aleo hiatrika izany, samy maniry ny hisehoany ho tsara ny tsirairay. Fa ny mijery tsara dia tsy zava-dehibe amin'ny volako toy ny mahazo aina, izay tena tsara amiko. Ny fitaovanao no mifandraika mivantana amin'ny hoditrao, izany ary ambonin'ireo seza fipetrahana rehetra, ny lambam-pandriana, ny kalisaona fohy, dia ataovy izay zavatra voalohany mahavoa anao amin'ny bisikileta.
Ankoatr'izay, miaro anao amin'ny fitaomana ivelany ny fitafianao, na masoandro, orana, lanezy na antenaina fa tsy ny arabe, raha mianjera kely ianao indraindray ary (bisikileta). Toa latsaka iray volana isam-bolana farafahakeliny aho. Ny fitafiana amin'ny bisikileta izay tsy ahitanao ny bisikileta alehanao na tsy miaro anao amin'ireo singa dia hamela anao ho ory eny an-dalana, fa safidy tena manokana momba izay ahazoana aina, na dia izaho aza.
Andao hodinihintsika ny antsipiriany. (mozika tony) Voalohany ny jersey bisikileta. Soa ihany, amin'izao fotoana izao, tsy mazàna vita amin'ny volon'ondry natoraly, fa amin'ny Lycra malama sy maivana.
Ankehitriny dia mila miaiky aho fa mpankafy akanjo lava be dia be ary mazàna aleoko T-shirt milamina toy izay lycra tery. Na izany aza, ity endrika mitazona vatana ity dia zavatra tena tsara amin'ny bisikileta satria tsy hoe fotsiny ny aerodynamika kokoa, izay tena manandanja raha te handeha haingana kokoa, manakana ny jironao tsy hikororosy noho ny zavatra rehetra ao an-damosinao paosy itahirizanao ny sakafonao, ny paompinao, ny findainao. Ka amin'ny bisikileta dia tsara raha tery.
Amin'ny safidy am-bisikileta anananao dia manana safidy maro ianao. Voalohany indrindra, manana tananao lava ianao amin'ny hatsiaka, tanany fohy ho an'ny hafanana, zipper iray feno ary amin'ny zipony sasany ny zipper iray halavany, henoko fa manontany ianao, maninona no misy zipper mihitsy? Ary, ny zipper iray feno dia ahafahanao manokatra ny akanjo anaovanao mba hametrahana azy ary hanala azy, ary hampangatsiaka koa rehefa mafana. Ny zipper antsasaky ny halavany dia somary aerodynamika kely kokoa, saingy manahirana bebe kokoa rehefa miova.
Azonao atao ihany koa ny manao jersey bisikileta nefa tsy misy zipper, sarotra kokoa ny mametraka azy. Izaho manokana dia mieritreritra fa mandeha tsara ny akanjo lava an'ny lehilahy na unisex, afa-tsy hoe lava loatra izy ireo matetika, midika izany fa ambany dia ambany ny paosy any aoriana, izay tsy tsara tarehy. (Mozika miala sasatra) baoty fohy manaraka.
Ity dia lohahevitra iray tena lehibe, koa mipetraha seza ary mahazo aina amin'ny pitsopitsony vitsivitsy. Andao hiresaka momba ny seza seza aloha. Ity no fonosana ao anaty pataloha fohy miaro ny chassis anao amin'ny lasely.
Pad seza avo lenta, toy ny ao anatin'ireny pataloha fohy UMA GT ireny, na ireo no pataloha fohy LaalaLai voafaritra ho an'ny vehivavy avy amin'ny ASSOS. Tena afaka manampy anao hahazo aina amin'ny lasely mandritra ny andro maro izy ireo. Misy karazany maro karazana ny endriny fohy ary ny hatevin'ny sezan'ny seza.
Ankehitriny dia tsara kokoa ho anao ve ny short sy ny seza manokana an'ny vehivavy? Angamba, fa tsy voatery. Ohatra, hitako fa mahatalanjona ny fohy indrindra an'ny vehivavy, fa toy izany koa ny pataloha fohy unisex. Ny zava-dehibe dia ny mahita zavatra mifanaraka aminao ary mifanaraka tsara amin'ny vatanao fohy ary ny seza no endrika mety. tsy mihetsika izany rehefa mitondra fiara ianao.
Tonga any anaty atin'akanjo isika ary ho hitan'ny olona sasany fa tena goavambe izany, saingy tsia, ny ankamaroan'ny mpitondra bisikileta dia tsy manao atin'akanjo ambanin'ny bisikileta bisikileta izay no fotoana nanombohako nandeha bisikileta, fa ny zavatra hita dia eo fotsiny ny atin'akanjo manampy ny fikororohana fanampiny ary mamorona disadisa any amin'izay ilana azy indrindra. Tena ratsy ny chafing ka tsy mila atin'akanjo ianao, ny sisa ataonao dia ny manasa ny bisikiletanao bisikileta isaky ny mandeha. Mora.
Tonga amin'ny fanontaniana manan-danja iray hafa isika, ny antsasaky ny fohy na ny baoty fohy? Bib short dia manana an'ity rafitra mpanohana ity mba hitazonana azy ireo ary mety manontany tena ianao hoe maninona no mifamatotra amin'ireo suspenders ny pataloha bisikileta? Ny anton'izany dia rehefa manana ny fampiatoana anao ianao dia tsy mila fehikibo, izay hitan'ny olona somary tsy mahazo aina rehefa miondrika bisikileta. Etsy ankilany, ny pataloha fehin-kibo dia mamela anao hanaisotra azy ireo haingana kokoa noho ny bibs satria tsy mila manokatra ny akanjonao aloha ianao, izay mety ho segondra sarobidy very anao rehefa maniry mafy ny fidiovana ianao. (mozika milamina) Ankehitriny tonga any amin'ny pataloha izahay, izay matetika anaovan'ny akanjo ba bisikileta, tsy ho an'ny insulement ihany fa koa, ary tena ilaina tokoa izany amin'ny fisorohana ny renitantely sy fanenitra mahatsiravina tsy hidina eo amin'ny vatofeninao.
Traikefa tena tsy mahazo aina azoko lazaina aminao. Ny hatezerana dia misy hateviny sy endrika ary habe samihafa, ohatra, ity ny sarimihetsika hoditra amin'ny fahavaratra avy amin'ny ASSOS, manify tokoa izy ary manaloka ny hatsembohana amin'ny hoditrao, ary ity dia baselayer an'ny lohataona / fararano evo7 an'ny ASSOS, tsy vitan'ny hoe misy tanany lava be fotsiny fa manify ihany koa nefa feno insulated mba hampafana anao amin'ny maraina mangatsiatsiaka kokoa. Misy karazana fonon-tanana marobe noho ny toetr'andro samihafa, manomboka amin'ny fonon-tanana amin'ny fiofanana amin'ny fahavaratra amin'ny rantsantanana fohy ka hatramin'ny neoprene ho an'ny orana mirotsaka hitazomana ny tananao ho mafana, mahazaka rivotra rehefa mangatsiaka nefa tsy avy ny orana, ary ireto no tiako manokana. tiBuru fararano na fonon-tànana lohataona, manify be izy ireo nefa mahafinaritra sy mafana ary misy patch eo am-pelatanana aza mba hahafahanao mampiasa ny findainao nefa tsy esorinao. (mozika mavitrika) kojakoja.
Betsaka ny kojakoja amin'ny bisikileta. Tsy torolàlana feno izany, fa topy maso kely fotsiny; andao hofongariny ho lasa kojakoja misy orana ary hitazona kojakoja mafana; indraindray ianao samy mila. Ohatra, ity no palitao solidmPrinz evo ASSOS, izay tena tsy tantera-drano ary mitazona anao ho maina amin'ny toetr'andro mivatravatra.
Azonao atao ny mampiasa satroka orana mba tsy ho hitan'ny ranonorana rehefa rotsakorana izy, na dia io aza ny palitao rivotra UMA GT Ankehitriny dia tsy tantera-drano izy io, fa mahazaka rivotra ary feno kely kokoa noho ny palitao orana izy. Avy eo isika koa dia manana mpanafana lohalika, fanafanana tongotra, fanafanana sandry, ireo dia fomba faran'izay mahay mandanjalanja rehefa mafana amin'ny maraina na amin'ny hariva, ohatra. Azonao esorina izy ireo rehefa mafana kokoa ary mila tanany fohy ianao.
Ny mandroso eo aminao dia manana baoty kitrokely izay mandehandeha eny ambonin'ny kiraro sy ba kiraro hanafanana ny rantsan-tongotrao koa. Tena azo ampiharina. Misy ihany koa ny kinova tsy tantera-drano.
Ary mazava ho azy ny fehiloha azo antoka hitehirizana ny sofinao sy ny lohanao amin'ny ririnina. (mozika mavitrika) Ny halavan'ny sock dia lohahevitra manaitra indrindra momba ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo mpitaingina bisikileta izay tia maneso ny triathletes fa tsy manao ba kiraro mihitsy. Eny tokoa, nisy fotoana tamin'ny bisikileta teny an-dàlana izay naha-lamaody ny hanaovana ba kiraro ampy hahavitan'ny lohalika, na dia teo amiko fotsiny angamba izany.
Saingy ankehitriny ny pro sasany dia mivoaka amin'ny fomba hafa ka aleon'izy ireo ba kiraro fohy hampiofanana mba hisorohana ny tsipika zanak'omby antitra, heveriko fa ny bisikileta rehetra dia tokony ho marin-toetra sy hirehareha amin'ny halavan'ny soja nofidiny. (mozika mavitrika) Ary ankehitriny amin'ny endriny, ary iza no miraharaha ny fomba? Eny ary, miahy ny amin'ny fomba rehetra isika. Fa ny tena izy, ny mahazo aina sy mankafy ny bisikiletanao dia zava-dehibe lavitra noho ny mijery ny tsara ho anao.
Misy akanjo fitondra bisikilety tena izy, tena tsara sy sokajy ho an'ny vehivavy any, na izany aza, ary miasa ihany koa izy ireo, koa maninona raha mankafy ny bika aman'endrinao amin'ny bisikileta? Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra hoe inona ny fomban'akanjo tadiavinao ary mazava ho azy, raha te hividy kit kitapo ASSOS GCN tsara ianao dia ho hitanao izany amin'ny alàlan'ny fanindriana ny magazay ary hahitana ny fomba nanaovan'ny ASSOS ny akanjony bisikileta tsara tarehy amin'ny fisintomana ity Watch ity ny lahatsoratra etsy ambany.
Ahoana no fiasan'ny bisikileta amin'ny akanjo?
Ny hevitra fototra dia ny manangona ilay kitapo misy zavatra mavesatra indrindra eto ambany ary mamoritra ny akanjonao mba tsy ho ketrona. Voalohany, raha mitondra solosaina finday ianao, dia tokony hipetraka miolaka ny lamosinao rehefa manao ilay kitapo ianao. Manaraka, amboary nyakanjokiraro anaty kitapo kiraro lamba ary apetraho eo ambany.08.17.2015
Izaho dia Antonio Centeno, mpanorina ny Real Men Real Style, ary anio dia hiresaka momba ny fomba fandehanana môtô sy hiakanjo akanjo lava aho. Eny ary, raha mbola tsy nanao izany ianao, dia midira azafady amin'ny fantsona YouTube anay.
Tonga mivantana aminao ireo lahatsoratra ireo, ankoatr'izay, raha tianao ilay lahatsoratra, raha hitanao fa mahasoa azy dia mba ataovy eto ambany ary farany hampifandraisiko amin'ny lahatsoratra iray izay hanome fanazavana misimisy kokoa momba izay lazaiko izany. Mampifandray anao amin'ny e-boky 47 pejy maimaimpoana amin'ny fomban'ny lehilahy ihany koa izahay. Eny, tsy misy ifandraisany amin'ny fitafiana môtô ity ary tsy dia te-hahafantatra ny fomba fijery môtô amin'ny môtôko aho.
Ny fanontaniana nipoitra dia ny lehilahy malala-tanana, mitondra ny môtôny foana izy ary ho azy ny resaka 'Ahoana no hahasalama ahy rehefa miala amin'ny bisikileta aho?' Satria izy manodina sy miverina azy, io ihany no asany Midika hoe fitaterana n ary tsy tena te hitondra ireo fitaovana rehetra izy. Niresaka momba ny karazan'akanjo toa maranitra izy azony anaovana tanjona roa. Ary ny valiny haingana ataoko dia hoe afaka mahazo roa ianao.
Heveriko fa hevitra ratsy ny manandrana sy mitafy na inona na inona afa-tsy fitaovam-piarovana rehefa mitaingina moto ary avy amin'ny mpitondra moto taona maro lasa izay, raha ny marina dia nanana moto telo aho nandritra ny taona maro. Tsy dia nitaingina be aho nanomboka tamin'izay, ary manan-janaka izao, saingy anisan'ny zavatra iray antsoina hoe tsingerin'ny mpanome izy ireo noho ny antony ary izany dia avy amin'ny lehilahy tia moto.
Saingy isan-taona aho dia mety hanao salanisa 40,000 kilaometatra, angamba 50.000 kilaometatra amin'ny moto. Nentiko ny zoro efatra. Tsy haiko raha ary tsy hoe ñ nandeha fiara fotsiny aho avy any Noviskosha nankany Victoria, nidina nankany Rosarita ary avy eo nankany Key West.
Nentiko io zavatra io. Nahatratra 48 fanjakana aho. Alaska sy Hawaii no ao anaty lisitra, saingy mbola tsy vitako izany ka nahazo traikefa môtô kely aho tamin'ny fanesorana ny tri, um Sprint ST, io zavatra io dia 100 000 kilaometatra mahery teo amboniny.
Bisikileta tsara, fa ny zavatra iray nianarako dia tsy ny momba anao sy ny fiarovana anao fotsiny, amin'ny fotoana iray dia hidona amin'ny zavatra ianao, na menaka izany, raha rano izany, raha mpitaingina adala ianao, misy olona mandeha mandondona anao amin'ny bisikileta rehefa nandroso kilaometatra maro ianao ary tsy maintsy miakanjo vao tonga lavitra - ary tsy fantatrao hoe rahoviana no hitranga izany. Ka manaova fiarovan-doha foana ary izany dia hanakorontana ny volonao, indrindra raha be volo ianao. Ka tena handeha tokoa ianao, tsy maintsy mankany amin'ny trano fidiovana ary mety manamboatra ny volonao.
Ny zavatra hafa dia ny fitafianao môtô vita amin'ny hoditra na môtôta synthetic izay namboarina sy namboarina ho anao rehefa misosa mankany amin'io lalana io ianao amin'ny 20 mph. Ka rehefa miresaka be dia be dia tokony ho mety aminao. Tsy afaka manao akanjo tsy miova ianao.
Mila manao akanjo mifanaraka amin'ny vatanao indrindra ianao, ary heveriko fa miampy izany satria mamela anao hitazona akanjo fanampiny mandritra ny fotoana iasanao. Fantatro fa ny sasany aminareo dia mety tsy manana biraon'ny anao. Tsy manana ny lalimoanao ianao. 'Aiza no tokony hitahirizako?' , miresaha amin'ny mpitantana anao ary mitadiava toerana hitazonana ny akanjonao, na dia valizy kely na boaty kely fotsiny aza, aiza no hitazomana tsara ny akanjonao hahafahanao mametraka azy eo ary rehefa miala ianao dia mitaky 5 fanampiny - 10 minitra ary amin'ny faran'ny andro dia heveriko fa mendrika izany.
Tombony iray hafa dia raha tena miditra ao ianao ary manana ny fitaovana feno. Hitako fa ny vehivavy toa ahy dia tsy mitafy akanjo hoditra feno. Manana tantara tsara be dia be avy amin'ireo vehivavy sendra nanome ahy ny karany sy ny nomeraon-telefaony aho isaky ny naniry aho - a, misy Iowa amin'ity indray mitoraka ity.
Niresaka tamina sakaiza iray tao amin'ny fivarotana kafe aho, Tom Webster. Mpisolovava izy tao ary - fa vehivavy sendra tonga fotsiny no nanome ahy ny nomeraony.
Eny, tsy hohenoinao ny sisa amin'ny tantarako satria mety hahita an'io ny vadiko, saingy azo antoka ny olona, ​​ny tiako holazaina dia ny tsy misy marimaritra iraisana eto. Karakarao tsara ny tenanao. Mahaiza moto ary ampiasao ho tombony ho anao.
Raiso ny fitaovana vita amin'ny hoditra feno. Mahafinaritra be rehefa mitaingina bisikileta ianao ary mijery tsara tarehy ary mahira-tsaina ary rehefa miala amin'ny bisikileta ianao dia makà fotoana sy fiomanana ho amin'ny fahombiazana mba hahafahanao mifamadika amin'ny fitaovana mety. Raha manao fiarovan-doha ianao dia hoditra milamina tanteraka ianao, fantatry ny olona ny antony anaovanao azy ary toa hendry kokoa ianao noho ireo bandy manao t-shirt, pataloha jeans ary tsy misy fiarovan-doha satria afaka milaza aminao aho fa sendra lozam-pifamoivoizana 5 mph, Mety hamono anao io ary vita haingana be Ity dia avy amin'ny tovolahy iray angamba nidina bisikileta indimy aho, ny telo izay raha tsy nanana ilay fitaovana aho dia mety ho naratra mafy kokoa.
Eny, izany no fijerinao maranitra avy amin'ny moto anao. Tandremo tsara; i Antonio Centeno niaraka tamin'ny Real Men Real Style. Mandrapihaona amin'ny lahatsoratra manaraka.
Inona no ataonao amin'ny bisikileta an-tanàna?
Mpanoratra lamaody ahobisikiletaNa aiza na aiza & Ity no Ianaovan'ireo
Kitapo lehibe (afaka miaina ao anaty kitapo kely mandra-mila anao)
Palitao tsy tantera-drano izay manarona ny bokinao.
Kiraro Izay Mijanona.
Eny,bisikileta afakaVonjeovery tavy kibo, fa mila fotoana. Ny fanadihadiana vao haingana dia nampiseho tsy tapakabisikiletamety hanatsara ny ankapobenyfahaverezana tavyary mampiroborobo lanja mahasalama. nyhampihenaankapobenykibofanatanjahan-tena aerôbika somary mahery, toy nybisikileta(na anatiny na ivelany), dia mahomby hampidina azytavy kibo.
Ela loatra ve ny fivezivezena adiny 1?
Amin'ny fifamoivoizana dia mety1-ora-ary-15 minitra.Commuteslava mihoatra ny 45 minitra dia miakatra 12 isan-jato amin'izany fe-potoana izany, ary 90-minitrairay-waycommutesdia 64 isan-jato no fahita kokoa noho ny tamin'ny 1990. Arakaraka ny haharetan'ny anaoniraharaha, ny fotoana kely anananao ho an'ny fianakavianao, ny namanao, ny fanatanjahan-tena ary ny sakafo mahavelona ary mahatsiravina izany amin'ny toe-tsainao.
Inona no ataon'ny bisikileta amin'ny vatan'ny vehivavy?
Mampihena ny risika amin'ny aretim-po, tapaka lalan-dra, homamiadana ary diabeta
Bisikiletatapakaveho fomba tsara ho an'ireoVEHIVAVYhananganana hetsika ara-batana sasany eo amin'ny fiainany, amin'izay hanatsara ny fahasalamany sy ny fahasalamany amin'ny ankapobeny.
Mampitombo ny vodinao ve ny bisikileta?
hitaingina bisikiletatapakaafakamanampy anao hamoy lanja sy hamindra ny hozatranyvatana ambany, manampy anao hamerina hanovany babosy tongotra. Na izany azany vatanaomety ho lasa mahia kokoa na ho matevina kokoa,mitaingina bisikiletatsy tena izyataovy lehibe ny vodinaona kely kokoa; manova ny bika fotsiny ilay izy.
Pataloha inona no tokony hataoko amin'ny bisikileta?
Pataloha bisikileta, Tights sy Warmers
Ny panneaux eo aloha dia mety hanome fiarovana ny rivotra, ary ny sasanypatalohamety ho tantera-drano sy tantera-drano tanteraka. Ny akanjo mafana dia mazàna tsy miaro ny toetr'andro fa aerodynamika kokoa. Commuter / mahazatrapataloha: Ny sasanypataloha bisikiletatoa akanjo vita amin'ny arabe ka afaka mifangaro avy hatrany ny mpitaingina amin'izay toerana aleha an-tanàn-dehibe.
Karazan'akanjo inona no tokony hataoko amin'ny bisikileta?
Karazan'akanjo bisikileta inona no anaovan'ny mpandeha?
Vakio ny fanadihadihana antsipirihany ary zahao ny fijerena voalohany ny fitaovam-pandehanana an-tariby isan-karazany, anisan'izany ny tsy fitondra amin'ny rano, palitao avo ary kiraro namana. Raha somary kely ny compression Lycra mandeha bisikileta saingy mbola mila tadin-tsolika ianao, zahao ity karazana akanjo bazy vita amin'ny bisikileta mirindra ity.
valizy tselatra bisikileta
Misy bisikileta vehivavy miasa akanjo ve?
Ny vehivavy dia mendrika akanjo komuter tsara toy ny fanaon'ny lehilahy, ary soa ihany fa manomboka mihaino ny fangatahana fitaovam-panatanjahan-tena, ahazoana aina ary bisikileta natao ho an'ny vehivavy ny orinasa, fa tsy ny haben'ny akanjon'ny lehilahy fotsiny. Ity misy lisitry ny sasany amin'ireo tsara indrindra hitanay hatreto.
Inona no tokony hotafiko mba hiasa ny diako?
Ho an'ny sisa amin'ny vatanao, ny fitafiana miaro anao dia hiasa - na dia mety tsy maintsy miova aza ianao rehefa tonga any amin'ny birao mafana. Manaova teritery ao ambanin'ny patalohanao ary baselayer matevina ao ambanin'ny lobanao na sosona volon'ondry eo ambanin'ny palitao. Raha ilaina dia ampio saron-tava na manafana ny hatoka amin'ny fitafianao hitazonana ny takolaka tsy ho voan'ny hatsiaka.